प्रतिकूलतालाई कसरी पार गर्ने ? (प्रेरक प्रसंग) - रामकुमार परियार
Home / अनुभुती / प्रतिकूलतालाई कसरी पार गर्ने ? (प्रेरक प्रसंग)
प्रतिकूलतालाई कसरी पार गर्ने ? (प्रेरक प्रसंग)
एकपटक विवेकानन्द काशीको एउटा साँघुरो गल्लीमा हिडिरहेका थिए । बाटोमा बाँदरको एक हुलसँग उनको जम्काभेट भयो । उनी डराएर फर्किन थाले । उनी भाग्न लागेको देखेर बाँदरको झुण्ड झन् उनीमाथी खनिन थाल्यो । बाँदरहरूले उनको कपडा च्यात्ने र हिर्काउने गर्न थाले ।
उनको यस्तो दुर्दशा देखेपछी छेउको घरबाट एकजना मानिस निस्किए र भने 'ए बाबु नभाग, बरू निडर भएर तिनीहरू तिर अघि बढ ।'
विवेकानन्दले त्यसै गरे, उनी छाती फुलाएर अघि बढे । सारा बादँर पर पर भागे । आक्रमण गर्ने प्रयत्न गर्थे तर सकेनन् ।
पछी विवेकानन्दले यो घट्ना स्मरण गर्दै भनेका थिए, 'प्रतीकूल स्थिती आए, बाधाहरू आए भने डराएर भाग्नु हुदैन, बरू छाती फुलाएर दृढ निश्चयले अगाडि बढ्नु पर्छ । यसरी नै तिनीहरूबाट पार पाइनुका साथै सफलता हासिल हुनसक्छ ।'